\_'मेरी श्रीमती भए पनि जमुनाको छुट्टै व्यक्तित्व छ\_'
असोज २७, २०७४| प्रकाशित १६:१९
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका अध्यक्ष शेष घले यतिबेला निकै चर्चामा छन् । एनआरएनको आठौं सम्मलेन शनिबारदेखि काठमाडौंमा हुँदैछ । यो सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभर छरिएर रहेका ७७ देशका प्रतिनिधि नेपाल आएका छन्।
लमजुङको घनपोखरामा जन्मिएका घले अस्ट्रेलियाका ९९ औं धनी व्यक्तिभित्र पर्छन् । पेसाले सिभिल इञ्जिनियर उनको अस्ट्रेलियामा रियल स्टेट, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । यसपल्ट एनआरएन अध्यक्षमा उनकै श्रीमती जमुना गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन् । जमुना अस्ट्रेलियाकी ८ औं धनी महिलाको सूचीमा पर्छिन्। यही सन्दर्भमा शेष घलेसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ?
फर्केर हेर्ने फुर्सदै पाएको छैन। हामी अधिवेशनको तयारीमा छौं। यसैमा व्यस्त छु। महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिएला।
त्यही पनि आफ्नो कार्याकालमा यति गरेँ भन्ने होला नि…
काम दुई खालका भए। एउटा देखिने र अर्को नदेखिने। संस्थाको सदस्यता वृद्धि, आर्थिक कोषमा वृद्धि देखिने काम भए। तर, नदेखिने काम नै हामीले धेरै गर्‍यौं। त्यसमा संस्थाको आन्तरिक प्रशासन, भित्री समस्या समाधान, विवादहरुको व्यवस्थापन आदि पर्छन्। यसका लागि भौतिक रुपमै विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्ने भएकाले समय धेरै बित्यो। यसरी हिँडिरहँदा एनआरएनएको अफिस नै झोलामा छ कि जस्तो महसुस पनि भयो। यहीबीचमा नेपालले नाकाबन्दी, भूकम्प र बाढीपहिरो झेल्यो। हामीले पनि त्यसमा आफूले सकेको सहयोग पुर्‍यायौं। भूकम्प प्रभावित गोरखाको बारपाकमा घर बनाउने प्रोजेक्टका लागि विगत ८ महिनामा ५० वटा औपचारिक बैठक गरिएको रहेछ । प्रशासकीय काममा धेरै समय बित्यो।
तपाईंको ‘एनआरएन भिजन २०/२० एन्ड वियोन्ड’ त विवादित भयो नि?
हामी ‘एनआरएन भिजन २०/२० एन्ड वियोन्ड’ यसपालिको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्दैछौं। यसबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छ। सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछौं। हाम्रो प्रस्तावलाई नजिकबाट नियालेकाहरु स्पष्ट छन् तर राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाएकाले बुझ्ने अवसर पाएका छैनन्। मलाई लाग्छ, यसपालि साथीहरुको सहमति जुट्नेछ। आगामी नेतृत्व यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सफल हुने अपेक्षा गरेको छु।
यसपल्ट एनआरएनको नेतृत्व तपाईंकी जीवनसंगिनी जमुना गुरुङले दाबी गर्नुभएको छ। आफूले पूरा गर्न नसकेका काम उहाँमार्फत पूरा गराउने तपाईंको चाहना हो?
एनआरएनमा उहाँ पनि सहभागी हुँदै आउनुभएको छ। त्यसैले यो मेरोभन्दा पनि उहाँकै चाहना हो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा आफ्नै खालको छाप छाड्नुहुनेछ। मैले नेतृत्व ग्रहण गर्दैगर्दा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। तर, नियमितभन्दा भैपरी आउने काममा बढी अल्झिनुपर्यो। त्यसैले काम केही बाँकी रहन पुगे। कामका हिसाबले सन्तुष्ट नै छु तर प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा दुःख लागेको छ।
हामीले भूकम्प पीडितका लागि एक हजार घर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं। तर, हामी ५ सय ५ घर मात्र बनाउँदैछौं। यसमा हाम्रो ३५ देखि ४० करोड लगानी भइसकेको छ। घोषणा गर्दा हामी बढी भावुक पनि भयौं होला। तर, हामीले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ गर्नेछौं पनि।
प्रतिबद्धता पूरा गर्न केले बाधा पार्‍यो?
हामीसँग अनुभव थिएन, त्यसैले अल्झियौं। अहिले हामीसँग एकखाले संरचना तयार भइसकेको छ। नेपाल आर्मीसँग सहकार्य पनि गरेका छौं। हामीले ठेक्कापट्टा नदिने भन्यौं, आफैं सहभागी भयौं। यस क्रममा हुन सक्ने भ्रष्टाचारबाट कसरी जोगिने? भन्ने अर्को पिरलो आइलाग्यो। खासमा यस्ता काममा धेरैका आँखा लाग्दा रहेछन्।
नेपालमा सहयोग गर्न निकै गाह्रो छ। सहयोग गर्ने क्रममा बीचका व्यक्ति र संस्थाले फाइदा लिन खोज्ने रहेछन्। त्यसबाट कसरी जोगिने भनेर होसियार हुनुपर्दो रहेछ। आवश्यकता भएको मान्छे फेला पार्न गाह्रो हुने रहेछ। जसलाई जरुरी छैन, उसले दाबी गर्ने रहेछ। प्रणालीको विकास नभएकाले गाह्रो हुने रहेछ।
श्रीमतीले नेतृत्व हासिल गर्नुभयो भने हाबी त तपाईं नै हुने होला…
यसअघि म नेतृत्वमा हुँदा पनि हामी दुवै सहभागी थियौं। श्रीमान्-श्रीमती भएकाले उसलाई घोच्दा मलाई पनि दुख्छ नै। तर, हामी अलग व्यक्तित्व भएका मान्छे पनि हौं। जमुना मेरी श्रीमती भए पनि उनको छुट्टै व्यक्तित्व छ। पहिचान छ। हाम्रो आ–आफ्नै परिचय र सोच छ।
नयाँ नेतृत्वलाई तपाईंको के सुझाव छ?
जो नेतृत्वमा आउँछ, त्योसँग काम गर्ने आफ्नै शैली र भिजन हुन्छ। त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अनावश्यक सिफारिस गर्नुहुन्न। उसले जे आवश्यक देख्छ, त्यसरी नै काम गरोस्। जहाँसम्म अनुभवको कुरा छ, त्यो विस्तारै हुँदै जान्छ। धेरैले नेता जन्मेरै आउनुपर्छ भन्छन्। म नेता हुन जन्मेको होइन, समयले बनायो। मैले यस क्रममा पनि सिकेँ। त्यसैले अर्कोले पनि त्यही अनुसार काम गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ।